Teknika azo antoka ampiasain'ny governemanta hiarovana ny vovoka fantsom-batana vita amin'ny vatana | Vahaolana OMG
Teknika azo antoka ampiasain'ny governemanta hiarovana ny vatan'ny fakan-tsary amin'ny vatana
Tena ilaina ho an'ny governemanta ny teknolojia vita amin'ny vatan-tena amin'ny fitazonana ny teny am-pilaminana eo amin'ireo sampandraharahan'ny lalàna sy ny sivily. Fomba iray nanaratsiana ny sehatra filalaovana izany ka mampiavaka ny andaniny sy ny ankilany rehefa mangataka onitra fitsarana ny roa tonta. Mety hitranga ny mpitandro filaminana mampiasa hery be loatra sy tsy ilaina rehefa mifampiraharaha amin'ny olompirenena iray, mety hisafidy ny hitory fiampangana izy ireo ary avy eo raha tsy misy porofo, dia sarotra ho azy ireo ny mahazo fahamarinana noho ny tsy fanarahan-dalàna. Miaraka amin'ny amboara vatana nampidirin'ny governemanta sy ny politika nolalovany tamin'ny fampiasana azy dia ho re ny feon'ny olon-tsotra tsy misy fahefana ary ho azo ny fahamarinana. Ny fananana fakan-tsary manodidina dia mamorona io "fahatsiarovan-tena" ho an'ny olona amin'ny ankapobeny, ka mahatonga azy ireo hanana faharatsiana na fanaovana fihetsika amin'ny fomba tsy ekena loatra. Amin'ny alàlan'ny fananan-kevitry ny mpampihatra lalàna ny fakan-tsary eo am-panafarany ny andraikiny, dia nahafahana nanara-maso sy nahafantatra izay ataon'ireo manamboninahitra ary raha misy fanadihadiana, ary misy dian-dalao milalao mba hahatakarana ny tena zava-misy. ny tena nitranga. Hatreto dia ny mpikambana ao amin'ny masoivoho dia mifikitra amin'ny politika ary aza manitsakitsaka azy ireo-fiainana manokana, dia tsy hisy olana na inona na inona ary tsy antony hanairana.
Tao anatin'ny fahatatahan'ny zava-nitranga tany Etazonia, izay nahitan'ny polisy ny tanora mainty hoditra tsy nitifitra. Nipoitra ny raharaha hafa ary tena naharesy lahatra ny firenentsika momba ny fampiasana hery mahafaty ataon'ny polisy izany. Isan'izay tao ny olana nahatonga ny famahana ny olana, fanatsarana ny fihetsiky ny manampahefana ary fiarovana ihany koa ny fampiatoana ny fiampangana momba ny fihoaram-pefy fanavakavahana. Tsy hoe vaovao tanteraka ny toe-tsaina momba ny fakan-tsary handrenesana ny zava-nitranga tao anatin'ny folo taona lasa, ny fakan-tsary napetraka ao anaty fiaran'ny polisy mba hijery maso ny zavatra ataon'izy ireo. Na izany aza, fandaharana iray izay misy ny polisy manao fakan-tsary miampy fahatsiarovana ho vaovao vaovao, taona vitsivitsy lasa izay, firenena vitsivitsy monja eran'izao tontolo izao no nandray azy io tany amin'ny faritany sy faritany. Saingy tato ho ato, tamin'ny US 6000, avy amin'ny polisy 18000, mampiasa azy io ankehitriny, dia mihamitombo hatrany ireo tarehimarika ary mihodina mihodina hatrany ireo politikam-pirenena raha toa ka ireo antitra dia manao fanavaozana hatrany, samy manao asa fanompoana ny vahoaka tsara kokoa rehefa manao ny asany. mora kokoa ho an'ny polisy.
Ny departemanta ho an'ny fiarovana ny tanindrazana (DHS) dia namorona ny fanombanana ny rafitra sy ny fankatoavana ho an'ny fandaharan'asan'ny mpamaly voalohany mba hahazoana antoka amin'ny alàlan'ny fenitra ankapobeny, hidirany ireo fitaovana ara-barotra ireo ary azony antoka fa izy ireo no tsara indrindra. Ny fangatahan'izy ireo ny teknolojia fampiasana dia:
Ny rafitra fakan-tsary dia tsy maintsy manana farafahakeliny herintaona iray avy amin'ny orinasa rehetra novidiny
Ny fakan-tsary dia tokony hanana jiro maivana manokana haingam-pandeha ahafahan'ny firaketana mora foana na dia tsy misy jiro aza.
Ny torohevitra sasany dia nomena momba ny olana manokana; inoana fa ny fakan-tsary mahazatra dia hanana olana kalitao ohatra: sary hafahafa ary ambany kalitao amin'ny alina. Ireo raha oharina amin'ireo fakantsary matihanina dia toa tsy ampy na iray aza satria voadaroka tamin'ny vola azony izy ireo. Mety hisy ihany koa ny olana momba ny fitoniana, indrindra raha toa ka manenjika ny manampahefana, dia nahatonga ny fakan-doha ho an'ny loham-boasary kokoa izy ireo noho ny antony toy izao satria ny lohany dia toy ny gyroscope izay manitsy ny fihetsiketsehana izay mahatonga an'io fahatahorana io. Ny fanosehana ny fitomboan'ny fakantsary manana vatana dia mitondra tombony ho an'ny fiaraha-monina toy ny:
Ny fahalemena amin'ny fifandraisan'ny hery sy ny olom-pirenena
Mitombo ny maha-matihanina bebe kokoa rehefa manatanteraka ny andraikiny amin'ny fomba matihanina ny manampahefana
Ny fifandraisan'ny sivily milamina kokoa, dia misy ifandraisany amin'ny fifandraisana tsy misy herisetra
Mitahiry vola marobe izay mety ho lany tamina fanadihadiana momba ny raharaha anatiny amin'ny asa ratsy nataon'ny manamboninahitra iray nefa mandamina ny raharaha mifandraika amin'ny fampiasana tsy ilaina fatiantoka
Satria toa mitombo ny fahalianana amin'ny haitao cameras amin'ny vatana, koa manana fanontaniana maro momba ny fampiasana ny teknolojia dia nitombo ary koa famotopotorana momba ireo politika mitondra azy. ho an'ny programa iray toa an'io dia fantatra fa ny fahaiza-manaon'ny tetik'asa dia tena zava-dehibe, ny sasany amin'ireo fanamby dia atrehin'ireo mitantana ihany koa. Anisan'izy ireo ny tahiry fitahirizana takiana ilaina amin'ny fitehirizana ireo firaketana ireo sy ny filana hitahiry azy ireo tsara. Eto no miditra ny fitahirizana rahona, saingy ity teknôlôjia ity dia hainganina azy ireo fotsiny. Ny fakan-tsary vita amin'ny vatana dia misy fiantraikany amin'ny departemantan'ny polisy hafa toy ny fandefasana fanampiana amin'ny solosaina sy ny rafitra fitantanana ny porofo. Ny fanamby lehibe indrindra atolotra dia ny vidin'ny fitahirizana angon-drakitra nataon'ny PERF hatramin'ny 2 tapitrisa dolara isan-taona.
Tao Angletera tao 2006 rehefa nampidirina ny fakantsary fiakanjoanana, nisy fiovana lehibe tamin'ny zavatra maro sy ny fampiasana hery tsy ilaina raha toa ka nidina 60% ny teknolojia, ny teknolojia ihany koa dia nanatsara ny fanangonana mafy mba handà ny porofo izay niafara ho vitsy kokoa tranga mitaky fitsarana. Ny polisy dia nampiasa ny fakan-tsary izay tsy dia mandeha amin'ny rano, mirakitra horonantsary miloko feno ary misy herinaratra mandritra ny ora 12. Ny vokatra taorian'ny herintaona taorian'ny fampiasana dia tena nahagaga; Ny fangaraharana sy ny matihanina dia nitombo be, ny fitarainan'ny manampahefana dia nilatsaka tamin'ny 90%. Ireo fijerena fiasa miandoha ireo dia nanome alàlana ny fananganana ary avy eo ny fahaterahan'ny fenitra ary koa ny fananganana ny politikam-bahoaka satria vetivety dia lasa olana rehefa nisy fitarainana momba ny fanitsakitsahana ny fiainana manokana. Amin'ny ankapobeny ny teknolojia nofinidy hampiasana dia tsy mavesatra, tokony ho lanja izany satria lasa olana raha toa ka miharihary ny lanja. Ireo fakantsary dia nitafy faritra maro tamin'ny vatana ka; loha, soroka ary tratra. Tsy maintsy niatrika fanadinana samy hafa ny polisy alohan'ny hanombohan'izy ireo izay mifanaraka amin'ny satrony sy ny solomasoany. Rehefa mitafy fakantsary vatana eo amin'ny lohany dia mirakitra izay jerena ataon'ny tompon'andraikitra. Tsara tokoa ny manenjika satria mihetsika ny gony ho toy ny gyroscope manamaivana ny fahatsoran'ny fakantsary, raha toa ny mitafy eo amin'ny soroka na ny tratra dia ny tombony dia ny firaketana an-tsoratra na inona na inona teo alohan'ny mpiandraikitra na dia tsy mijery azy aza izy. Ny masoivoho misahana ny fanovana dia mila ny fakan-tsary mba hametahana anarana amin'ny daty sy ny fotoana amin'ny toerana misy azy ny hetsika, raha tsy misy izany filazana izany dia lasa tsy misy ilana azy ny fanadihadiana.
Rehefa nanomboka namoaka fakantsary vatana ny departemantan'ny polisy any California dia nampahafantarin'izy ireo ny manampahefana fa ny 30 mins firaketana an-tsoratra dia 800mb fitahirizana. Amin'ny kajy amin'izany; raha manana manamboninahitra 200 izy ireo dia mila mitahiry azy ireo, ao anatin'ny herintaona ilany ny 33Tb fitahirizana. Tena maro be io ary ny fakantsary vita amin'ny vatana dia azo isaina hamokatra rakitra horonan-tsary marobe ary koa metadata handehanana sy hitantanana ireo horonan-tsarimihetsika ho an'ny fitehirizana ny tanjon'ny gadra. Amin'ny tranga mifandray amin'ny fakan-tsary amin'ny vatana, ny politika dia mifamatotra amin'ny fanontaniana hoe aiza no hitahiry ny angon-drakitra angonina. Ny politika momba ny fihazonana dia mety hanimba ny ampahany amin'ny teti-bola natokana ho an'ny fakan-tsary mitazona vatana. Amin'ny faritra sasany, antenaina tsy ho voafafa eo anelanelan'ny 60-90days ny angon-drakitra hita maso. Ny sasany dia nangataka ny hampitomboina izany raha ny sasany kosa nangataka azy mba hihena. Tanàn-dehibe maro te-hametraka ny fakan-tsary mandeha amin'ny vatana no mahita ny olana fitahirizana angon-dry zareo natrehan'izy ireo, ho hery iray nanenjika azy ireo sy nanakana azy ireo tsy handroso miaraka amin'ilay fandaharana na dia efa te-hamita izany aza izy ireo. Ny rafi-pitsarana nasionaly dia nilaza fa ny lahatsary dia manjary zava-dehibe kokoa amin'ny departemantan'ny polisy ary tokony hatao ireo fanitsiana fitahirizana ireo.
Ny teknolojia CLOUD
Ny teknolojia rahona no vahaolana lehibe tamin'ny olan'ny fitehirizana fakan-tsary nefa tsy mbola nampiharina satria tsy nahafeno ny fepetra ara-pitsarana nataon'ny FBI momba ny fahamarinana (CJIS). Tato ho ato izay dia miova ny toe-java-misy ankehitriny izao fa misy ny goavambe sasany manolotra ny fitahirizana rahona izay tena mahafeno ny takian'ny FBI izay tsy notanterahina teo aloha izay nanakana ny fampiharana tanteraka azy. Ny tombontsoa sasany amin'ny teknolojia rahona dia: scalability, fidirana amin'ny fanavaozana sy ny fahombiazana amin'ny vidiny. Ny rahona dia nanala tanteraka ny olan'ny fitahirizana izay tsikaritra tany am-boalohany izay nahatonga azy handamina ny vidiny hampiakarana ny teknolojia ampiasain'ny vatana.
Teknika azo antoka ampiasain'ny governemanta hiarovana ny vatan'ny fakan-tsary amin'ny vatana no farany niova: Desambra 3rd, 2019 by Admin
4585 Total Views 9 Views Today